चिकित्सा शिक्षाका ४३ दोषीलाई कारबाही गर्न डा गोविन्द केसीको माग, « Karobar Aja
दस्तावेज, असार २ गते शनिवार, २०७५, काठमाण्डौं – चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएका ४३ जनालार्इ कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले दोषी देखिएकालाई उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै डा केसीले कारबाहीको माग गरेका हुन्। उनले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याए चिकित्सा शिक्षामा धेरै सुधार आउने बताए।
डा. केसीले यो सहित अन्य ६ बुँदे माग राख्दै अाज माइतिघर मण्डलामा निषेधित क्षेत्रको भद्र अवज्ञा गर्ने भएका छन्। सरकारले माइतीघरको निषेधित क्षेत्र घोषणा फिर्ता लिनुपर्ने पनि छ।
यी हुन् डा. केसीले राखेका ६ बुँदे माग